Home SOUTH AMERICA FOOTBALL ụmụaka Miguel Almiron Childhood Story Plus Ihe Ndi Utold Biography Eziokwu
Emelitere ikpeazụ July 2, 2020
LB na-egosi Full Story of a Football Genius kasị mma mara aha ya bụ "Miggy“. Anyị Miguel Almiron Childhood Story Plus Untold Biography Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị ama ama sitere na mgbe ọ bụ nwata ruo ụbọchị.
Ndụ na nbilite nke Miguel Almiron- Kwere nye ọkara,ThePlayersTribune na SkySports
Ee, onye ọ bụla maara banyere ịdị umeala n'obi ya na ndụ, onye nwere ike imerụ ugo na ama. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle akụkọ ndụ Miguel Almiron nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị ọzọ ado, ka anyị malite.
Miguel Almiron Childhood Story Plus Ihe Ntinye Aka Banye Banyere Banye N’anya Mmalite Ndụ na Ezinụlọ
Na-amalite, aha ya zuru oke bụ Miguel Ángel Almirón Rejala. A mụrụ Almiron na ụbọchị 10 nke February 1994 nne ya Sonia Almiron na nna, Reuben Almiron n'isi obodo Asunción, Paraguay. N'okpuru ebe a bụ foto nke Sonia na Reuben, nne na nna ya mara mma.
Miguel Almiron nne na nna- Sonia na Reuben Almiron
Miguel Almiron WASN'T zụlitere n’ezigbo ezinụlọ ma ọ bụ nke ụlọ ezumezu. Ezinaụlọ ya dị ka ọtụtụ ndị ogbenye na Asunción bụ ndị na-arụ ọrụ mana agụghị akwụkwọ agụmakwụkwọ kacha mma ma na-alụ ọgụ mgbe ụfọdụ.
Miguel Almirón hụtara onwe ya na-etolite na ezinaụlọ ogbenye, otu nke nna ya Reuben rụrụ ọrụ oge 18 dịka onye nche na nne ya Sonia na-arụ ọrụ dị ka onye na-echekwa ụlọ ahịa. Miguel Almiron nwere ihe banyere 5 ụmụnne. Ndị ụlọ asaa asaa nke ụlọ ya jisiri otu obere ụlọ na obere Miguel n'onwe ya na nne ya ịkesara.
Miguel Almiron Childhood Story Plus Ihe Ntinye Aka Banye Banyere Banye N’anya Nkụzi na ịrụ ọrụ
Icgba bọọlụ bidoro n'isi nwata nwoke dị jụụ na onye ihere. N'ihi na ndị mụrụ ya dara ogbenye, obere Miguel Almiron enweghị ohere ịnweta nke ahụ Mkpokọta egwuri egwu ọhụụ nke KỌỌ KWES onlyR only naanị bọọlụ bọl ochie nke ọ gbara ọtụtụ oge n'ụbọchị.
Miguel Almiron dị ka obere nwa. Ebe E Si Nweta: TPT
Miguel Almiron gara ụlọ akwụkwọ praịmarị Escuela Basica ebe ọ rụrụ egwuregwu mara mma nke football. “Miguel bụ nwa akwụkwọ dị nwayọ nwayọ nke na-eme ọrụ ụlọ ya. Ọ bụghị otu n'ime ụmụaka ụmụaka ahụ dị umengwụ na-enweta mmụọ ma ọ bụ na-enweghị mgbagha mgbe niile, ”Onye nkụzi ya bụbu Maria del Pilar Bernal kpughere.
Ka Miguel Almiron tolitere wee bụrụ onye dị afọ 7, ọ malitere nrọ nrọ ime ka ọ buru ibu. Ihe kachasi ya nma bu inwe ego zuru oke iji zuta ezinulo ya nnukwu ulo. Na mbido, ọ hụrụ na atụmanya nke ọrụ ịgba bọl bụ naanị ụzọ iji nyere ezinụlọ ya aka ịhapụ ịda ogbenye. Nkwenye a hụrụ ya ka ọ na-etinye ike ya na mkpebi siri ike n'ihe omume football nke bidoro n'ọhịa a kwadebere gburugburu mkpọda nke San Pablo barrio, Asuncion.
Ọgba ọkpọ siri ike ebe Miguel Almiron mụrụ otú e si egwu bọọlụ. Ekele si ThePlayersTribune
Ọgba mmiri kpọrọ nkụ, nke nwere ọkpụkpụ ebe Miguel na-akọ nkà ya nyere ya usoro ikpo okwu iji kpebie ọdịnihu ya. Nna nna Almiron Reuben kwadoro nwa ya nwoke site na ịwepụ ya na mpaghara nkasi obi ya iji mee ka ya na ndị enyi na-asọrịta mpi.
"Miguel bụ onye ụjọ. Ọ tụkwasịghị ya obi, ụjọ tụwa ya. ya mere m kuru ya (gaa klọb) ka o nwee ndị enyi ndị ọzọ,Nna ya Ruben Almiron gwara ya ESPN.
Miguel Almiron Childhood Story Plus Ihe Ntinye Aka Banye Banyere Banye N’anya Ndụ Ndụ Mmalite
Miguel Almiron bidoro ime nke ọma ozugbo ma nwee ọtụtụ ndị enyi n'ime ọnwa ole na ole ịhapụ nkụ, ọkpọ ọkpọ siri ike dị nso n'ụlọ ya. Oge agaghị tupu ọ nabata ya na Nọmba 3 Club, ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ nke ndị otu ya mere egwuregwu na ngalaba nke atọ nke football Paraguayan. Acadelọ akwụkwọ agụmakwụkwọ ahụ bụ nnukwu okwute ụlọ akwụkwọ praịmarị ya.
N’ịghọta agụụ nwa ha nwoke nwere ịgba bọl na mkpa iji nweta ihe ọ ga-eri, ndị ezinụlọ ya niile, tinyere ndị ikwu mere ike ha niile iji kwado ọchịchọ ya. N'okpuru ebe a bụ ncheta ncheta banyere oge ọrụ ya.
Miguel Almiron Early Life with football- Onye hapụrụ ya na-echeta Ebe E Si Nweta TheSun
Ndị nne na nna Miguel Almiron hụrụ na nwa ha nwoke anaghị echezọ nkuzi football ya. Nwanne nna ya site na aha “DiegoNa nna m ochie nke na-aza aha “CheloHa niile sooro ya soro mee ihe.
Miguel Almiron Childhood Story Plus Ihe Ntinye Aka Banye Banyere Banye N’anya Akpanwu akwukwo akuko
Ohere dị iche iche bịara dịka Miguel Almiron na-aga n’ihu n’ihu ya. Na afọ 14, Miguel dị njikere ịhapụ November 3 Club maka ohere ọhụrụ. Nwa ahụ na-eto eto nwetara kpọrọ maka a ikpe na Club Nacional, klọb na-agbasasị ihe iteghete iteghete nke Paraguay's Primera Division.
O di nwute, o meriri ule ya na klọb. Iji mee ka nwa nwoke nwanne ya kwụsị ịchọrọ na nrọ ya, nwanne nwanne Miguel Almeron Diego kpebiri iwere ya n'aka ya. Diego nyeere ya aka ichebe ikpe ọzọ na Cerro Porteno. N'okwu ya…
"Anyị kpọọrọ ya na nne ya gaa ule ebe anyị zutere ụmụ nwoke 300 ugbua na-eche inweta otu ohere ahụ. Agaghị m echefu ya n'ihi na Miguel bụ nọmba 301 n'ime ndị otu ahụDiego nwanne nwanne Miguel Almeron kwuru.
Miguel gabigara ọnwụnwa n'ihi ikike ya. Agbanyeghị, ọ ka na-arụ ọrụ ozugbo maka Almiron, onye dara igwu egwu maka otu dị n'okpuru 15 na N'okpuru 16 otu. E boro ya ebubo na ọ dị oke nfe, onye na-enweghị ike itolite.
Otu mgbe, a na-ebo Almiron ebubo na ọ dị fechaa. TpT
Ọ dị nwute na November 2010, mgbe ndị egwuregwu ụlọ akwụkwọ na-agbadata site na squads, Miguel dara ogbenye so n'etiti aha ndị ahụ (na ndepụta ahụ) ka a ga-agbada. Ihe iyi egwu nke ịtụda Miguel Almiron gara n'ihu na 2011 afọ na-enweghị olileanya ịhụ ya ka ọ na-eto. N'oge ọ nọ na ngwụcha nke ọgbakọ ahụ, onye nkuzi ya mbụ Hernan Acuna batara, nye ya mgbapụta.
Hernan Acuna biliri ọtọ maka Almiron. Ebe E Si NwetaTigoSports
"Agakwuuru m onye nhazi na ndị nta akụkọ wee sị ha: 'Achọghị m ka klọb ahụ chụpụ nwata ahụ nanị n'ihi na ọ dị ụcha.Acuna kwuru, klọb a n'okpuru onye nchịkwa 17.
Hernan Acuna bụ mmụọ nche ahụ nke mere Almiron ka ọ bụrụ onye na-elekọta akụkụ ya, na-enye ya ọrụ igwu egwu. Ọ bụ ya kpatara ya gụsịrị Miguel Almiron ka ọ banye na klọb mbụ nke klọb.
Miguel Almiron Childhood Story Plus Ihe Ntinye Aka Banye Banyere Banye N’anya Na-ewu ewu Akụkọ
Miguel Almiron na nloghachi kwụrụ ụgwọ site na inyere ndị otu ya aka inwe mmeri Paraguay Clausura trope na 2013 na Clausura trofi na 2015. Na August 2015, Miguel Almirón chere na ọ dị mkpa ka ekpughere ya n'ọdịbendị na ụzọ ọzụzụ ọhụụ, yabụ na-ekpebi ịhapụ obodo ya.
Almiron bịanyere aka na Club Atlético Lanús na Argentine Primera División. N'ime oge dị anya, Almiron nyeere klọb aka inweta mmeri 3 ya bụ- Copa Bicentenario, Supercopa Argentina na Argentine Primera División trofi niile na 2016.
Miguel Almiron nwere nnukwu ihe ịga nke ọma na Club Atlético Lanús. Ekele diri IG na Picnano
Mgbe o mechara ihe ndị a, Almiron hapụrụ obodo ahụ gaa US ebe ọ bịanyere aka n'akwụkwọ maka Atlanta United FC. Ị maara?… Ihe ịga nke ọma gara n'ihu na United States. A kpọrọ Miguel Almiron na MLS Best XI maka oge abụọ ya na Major League Soccer, yana ndekọ maka MLS Newcomer of the Year maka 2017. Oge ya kachasị na US bụ mgbe o nyeere ndị otu ya aka ka ha merie MLS Cup na 2018.
Miguel Almiron Akụkọ banyere ihe ịga nke ọma- The Rise to Fame Story. Ekele diri IG
Na 31 Jenụwarị 2019, Almirón sonyeere Newcastle United maka ụgwọ ndekọ klọb nke kụrụ ya ihe ahụ Michael Owen. Dị ka n'oge a na-ede akwụkwọ, o birila ndụ na North East nke England na ndị Newcastle na-enwe obi ụtọ na ha mechara nwee onye ọkpụkpọ ha nwere ike inwe. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Miguel Almiron Childhood Story Plus Ihe Ntinye Aka Banye Banyere Banye N’anya Ndụ mmekọrịta
N'azụ nwoke ukwu ọ bụla bụ nwanyị, otu a ka okwu si dị. Na n'azụ ihe niile ụdị egwuregwu, enwere nwunye na-adọrọ adọrọ ma ọ bụ enyi nwanyị dị ka a hụrụ na onye mara mma nke Alexia Notto bụ onye bụrụ nwanyị nọ n'azụ ndụ ịhụnanya Miguel Almiron.
Zute ọmarịcha Alexia Notto- Nwanyi Miguel Almiron. Ekele diri IG
Nwa nwanyị mara mma nke nwere agba ojii nke Miguel Almiron zụrụ nke ọma na Zumba. Nke a bụ mmemme mmega ahụ ama ama nke ukwuu na mpaghara South America. Alexia Notto mere nke a iji kpata ndu tupu ya na nwoke ya aga US ma gazie Europe.
Miguel Almiron jikọtara ọnụ ya na enyi nwanyị ya gburugburu November 2016, afọ ahụ ihe ịga nke ọma ọfụma ya malitere. Ọ bụ n’afọ ọ bụ onye na-adịghị. Na-ekpe ikpe site na foto agbamakwụkwọ ha, ọ dị ka ememe onwe onye naanị ndị ezinụlọ na-akpọ oku.
Foto Miguel Almiron na Alexia Notto Wedding Photo
Ebe ha jikọtara ọnụ, ndị hụrụ ha abụọ enweela ọlụlụ nke onwe na nke nkiri. Dị ka n'oge edere, di na nwunye ahụ na Alexia Notto biri na North East England ugbu a inye nkwanye ugwu obi niile di ya nye ya, ị putara itinye ya ọrụ nke Zumba.
Miguel Almiron na Alexia Notto biri ndụ na Newcastle. Ekele diri IG
Miguel Almiron Childhood Story Plus Ihe Ntinye Aka Banye Banyere Banye N’anya Ndụ nke Onye
Tomara ndụ Miguel Almiron nke ọma na ebe egwuregwu bọọlụ ga - enyere gị aka ịmata onye ọ bụ nke ọma.
Tomata Miguel Almiron Ndụ Nkeonwe. Ebe e si nweta MSN
Offmalite, Miguel Almiron bụ otu n'ime ndị egwuregwu 5 kachasị elu nke nwere mmụọ kachasị umeala n'obi na ndụ. Ọ bụ onye na-adabaghị ọgụ ma ọ na-erube isi nke ukwuu.
Dịka N'golo Kante, amụrụ ya bụ onye ihere ma dịkwa nwayọ, mana n'aka nke ọzọ, nwere ike ịba uru na ike karịchaa mgbe ọ na-arụ ọrụ ya na olulu. Miguel Almiron bụ onye miri emi na-eche echiche na onye nwere ọgụgụ isi miri emi nke na-eji uche ya na ohere ọ bụla.
Miguel Almiron Childhood Story Plus Ihe Ntinye Aka Banye Banyere Banye N’anya Ndụ Ezinụlọ
N'ikpeazụ, Miguel Almiron mezuru nkwa ịzụta maka ndị mụrụ ya na ndị ezinụlọ ya ụlọ n'oge ọ kwagara na Lanus nke Argentina na 2015, kwa afọ ọ lụrụ. Ọ gha azụta ụlọ n'otu ebe o tolitere, otu buru ibu iji nwee ụlọ maka nna ya, mama ya, nna nna ya, nne nne ya, nwanne nna ya, nwanne na nwanne.
Taa, ụgwọ ọrụ buru ibu na-elekọta ndị ezinụlọ ya niile. Miguel na-emefu ego na ịgbazite ma nyekwaara ha ụlọ n'obodo niile bọọlụ ya na-akpọrọ ya.
Ndị otu Miguel Almiron gbara maka foto. Ekele diri IG
Na-eche nne ya na nna ya, nwanne nna Almiron Deigo bụ onye ọzọ na-esote mmetụta na ndụ ya. Diego bụ onye ọrụ maka inyere nwa nwanne ya aka ịda mba mgbe ikpe ya na Club Nacional mechara daa.
Zute Miguel Almirons nwanne- Diego
Miguel Almiron Childhood Story Plus Ihe Ntinye Aka Banye Banyere Banye N’anya LifeStyle
Miguel Almiron bụ ezigbo onye egwuregwu ịgba bọọlụ nke akwụ ụgwọ na-ekwu oke. N'otu oge, ọ jidere ndekọ nke 12th player kachasị ụgwọ na akụkọ ihe mere eme nke Major Soccer League (MLS). Maka onye mere $ 209,000 otu ihe mgbaru ọsọ mepụtara ma jigide ọnụ ahịa ahịa nke $ 9 nde, a na-atụ anya na o kwesịrị ibi ndụ na-adọrọ adọrọ dị ka a hụrụ n'okpuru.
Ingghọta Ndụ Miguel Almiron. Ebe e si nweta ya Telegraph
Ma, nke a abụghị ya. Miguel Almiron na-ebi ndu ala ma mara ihe banyere ijikwa ego ya.
Miguel Almiron Childhood Story Plus Ihe Ntinye Aka Banye Banyere Banye N’anya Eziokwu efu
Onye ọkpụkpọ kachasị amasị ya nke oge niile nọgidere bụrụ onye mgbaru ọsọ:
Miguel Almiron zaghachiri ngwa ngwa mgbe a jụrụ ya onye egwuregwu ọ kacha nwee mmasị na akụkọ egwuregwu. Ihe omuma ya banyere football, enwere otu arusi. Ọ bụghị onye ọzọ ọ bụla karịa onye mgbaru ọsọ mbụ ahụ Paragiuan- Chilavert onye bụ onye isi ndị otu mba n’oge ndị 1990.
Zute José Luis Chilavert- Molel Almiron's Idol. Ebe e si nweta ya FoxSports.
Ị maara! Chilavert bụ naanị onye mgbaru ọsọ na akụkọ ntolite onye na-ejide kicks na ntaramahụhụ n'efu, na-eme ka ọ bụrụ onye mgbaru ọsọ mgbaru ọsọ kachasị nke abụọ nke oge niile.
Etu ihe CV ya di ka n’oge edere ede: N’ile anya na nkwanye ugwu nke onwe ya na klọb, ị ga - enwe ike ịmata ihe kpatara Newcastle United ji kpebie ịkwụ ego karịa nke ahụ were zụta Michael Owen iji zụta Miguel Almiron.
Miguel Almiron na ndị otu ya na-asọpụrụ
Dịka a hụrụ n’elu, Miguel Almiron nwere oge ọ ga-enye ndị were ya n'ọrụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oge ọ bụla, na-amalite site na 2016.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ anyị Miguel Almiron Nwatakịrị Akụkọ akụkọ gbasara eziokwu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike ka anyị mee ihe ziri ezi. Ọ bụrụ na ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.